ပလတ်စတစ် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ထုတ်လုပ်သူ အားလုံး - တရုတ် ပလတ်စတစ် ပေါက်ကွဲမှု ဒဏ်ခံ တင်သွင်းသူများ & စက်ရုံ အားလုံး
BCZ8060 စီးရီး ပေါက်ကွဲ-တိုက်စား-ဒဏ်ခံ ပလပ်ပေါက် ကိရိယာ
7. AC 50HZ လိုင်းနှင့် ဗို့အား 690V (380V)၊ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
BCZ8030 စီးရီး ပေါက်ကွဲ-တိုက်စား-ဒဏ်ခံ ပလပ်ပေါက် ကိရိယာ
7. AC 50HZ၊ ဗို့အား 690V (380V) လိုင်းများတွင် ကေဘယ်လ်များနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
BYS စီးရီး ပေါက်ကွဲ-ဒဏ်ခံ ပလပ်စတစ် (LED) ချောင်းမီးချောင်းများ
1. ရေနံရှာဖွေရေး၊ ရေနံသန့်စင်ရေး၊ ဓာတုဗေဒ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အထွေထွေအလင်းရောင်နှင့် အလင်းရောင်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
2. ပေါက်ကွဲတတ်သော ဓာတ်ငွေ့လေထုအတွက်၊
3. IIA, IIB, II C ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့လေထုနှင့် သက်ဆိုင်သည်။
5. မြင့်မားသော၊ စိုစွတ်သောနေရာများတွင် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များပါဝင်သော အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
6. စွမ်းအင်ချွေတာသော ပရောဂျက်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အလင်းရောင်
BYS-Ⅲ စီးရီး ပေါက်ကွဲမှု ဒဏ်ခံနိုင်သော ပလပ်စတစ်ချောင်း အပြည့်အစုံ
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံချက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် ဘုံအလင်းရောင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အလင်းရောင်အတွက် အခြားနေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
BYS-xY စီးရီး တိုက်စားမှုနှင့် ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ ချောင်း (LED) မီးအိမ် (သန့်ရှင်းရေး)